एंगेल्सलाई माक्र्सको हृदयबिदारक चिठी – www.janabato.com
एंगेल्सलाई माक्र्सको हृदयबिदारक चिठी
१६ असार २०७५, शनिबार ०२:४८ June 30, 2018 जनबाटो मिडिया प्रा.लि.
८ जनवरी १८६३, लण्डन
मेरी(बर्न) को निधनको खबरले मलाई मर्माहतभन्दा पनि आश्चर्यमा पा-यो । उनी निकै असल स्वभावकी, बुद्धिमान र मसँग नजिक थिइन् ।
यो भूताहा समयलाई मात्र थाहा होला, अरु केही कुराले होइन बरु दुर्भाग्यले एकै चोटी हाम्रो समूहका सबै साथीहरुलाई ङ्याकिरहेको छ । कतातिर मात्र हेर्ने हो, म त विलखबण्डमा परेको छु । फ्रान्स र जर्मनीमा पैसा उठाउने मेरो प्रयास निरर्थक भयो । निसन्देह १५ पाउण्ड पैसाले दुई साताभन्दा बढी समयको हिमपहिरो सामना गर्न गाह«ो हुनु स्वाभाविक छ । मासु पसल र रोटी पसलेले बाहेक हामीलाई कसैले पनि केही उधारो दिनेछैन । अनि यो सातादेखि मासु पसले र रोटीपसलेले पनि उधारो दिन रोक्नेछ । म त केटाकेटीको स्कूलमा तिर्नुपर्ने पैसा, कोठाभाडा र अरु त्यस्ता धेरै कुराले वाक्क बनाइसकेको छ । जोसँग केही पाउण्ड बाँकी छ, उनीहरुले पनि लोभवश ती पाउण्ड गोजीमा लुकाउने गरेका छन् अनि मैमाथि गाह्रुँगो भएर थोपरिएका छन् । सबैभन्दा दुःखको कुरा त, केटाकेटीसँग कुनै लगाउने लुगा वा जुत्ता छैनन् । सारमा भन्दा सबै नरक जति यतिबेला खुल्ला भएका छन् । म्यान्चेस्टरमा आउँदा नै मैले यो स्थितिको प्रष्ट अनुमान गरिसकेको थिएँ र अन्तिम बचावटको रुपमा मैले मेरी श्रीमतीलाई पेरिसमा पठाएको थिए । ऋण समाज वा जीवन वीमाबाट मैले केही रकम लिन नसके(मैले त्यसको कुनै सम्भावना देखेको छैन, ऋण समाजमा त मैले सक्दो सबै प्रयास गरिसकें तर कुनै फल दिएन । उनीहरु कोही जमानी खोज्छन्, कोठा भाडा र खर्चको रसिद ल्याउन भन्छन् । म त्यो ल्याउन सक्तिनँ ।) त्यसकारण मेरो घर अब अर्को दुई साताभन्दा बढी टिक्न सक्ने अवस्था भएन ।
यो समयको विषादपूर्ण अवस्थाबारे तिमीलाई भन्नु साँच्चै म आफै ज्यादै्र स्वार्थी हुनु हो । तर यो होमियोप्याथिक उपचार हो । एउटा विषाद अर्को विषादबाट विकर्षण हो । अनि अखिरमा म गर्न नै के सक्छु र ? सिंगो लण्डनमा मैले आफ्नो दुःख बिसाउने कोही एक जना मान्छे पनि छैन । म आफ्नै घरमा आफूभित्रको अर्को पक्षको आग्रहलाई सन्तुलनमा राख्न चुपचाप सङ्घर्ष गर्ने बलियो मन बाँडेर बस्ने गरेको छु । वास्तवमा यस्तो अवस्थामा काम गर्न लगभग असम्भव जस्तै भइसकेको छ । मेरीको निधन मेरोलागि आफ्नो आमा गुमाएजत्तिकै पीडादायी बनेको छ । मेरी आमा त शारीरिक अस्वस्थ्यताको शिकार बन्नुभयो र जीवनको धेरै भाग बिताइसक्नुभएको थियो । आज ‘सभ्य मानिस’हरुको टाउकामा निश्चित परिस्थितिको दबाब थामिरहनुपर्ने चकित पार्ने मापदण्ड बनेको छ ।
तिमीले आफ्नो बसाईबारे के बन्दोबस्त गर्ने विचार गरेका छौ ? मेरी घरमा हुँदा तिमीलाई मानवीय झन्झटबाट जतिबेला चाहे पनि मुक्त भएर बस्न सक्ने अवस्थामा थियौ ।
← माक्र्सवादी दर्शनको राम्रो पुस्तक
प्रकाश दाहाललाई श्रद्धाञ्जली दिन नर्भिकमा नेता र शुभेच्छुकहरुको भीड (फोटोसहित)
३ मंसिर २०७४, आईतवार ०५:५४ जनबाटो मिडिया प्रा.लि. Comments Off on प्रकाश दाहाललाई श्रद्धाञ्जली दिन नर्भिकमा नेता र शुभेच्छुकहरुको भीड (फोटोसहित)
अमेरिकाले हतियार बिक्री दोब्बर बनायो, युद्धको सम्भावना
१५ आश्विन २०७४, आईतवार १६:०८ जनबाटो मिडिया प्रा.लि. Comments Off on अमेरिकाले हतियार बिक्री दोब्बर बनायो, युद्धको सम्भावना
कवि निभा शाहलाई परेको मातृशोकप्रति महासङ्घद्वारा समवेदना
२१ पुष २०७५, शनिबार १५:०९ जनबाटो मिडिया प्रा.लि. Comments Off on कवि निभा शाहलाई परेको मातृशोकप्रति महासङ्घद्वारा समवेदना